Tsy mahafa-bela izay lazaina sy atao | NewsMada
Tsy mahafa-bela izay lazaina sy atao
Kabary tsy valin’ny mpitondra tato ho ato indray ny amin’ny fanajana sy fampiharan-dalàna, fandraisana andraikitra. Mby iza? Tsy misy tsy mikaikaika izao ny amin’ny tsy fandriampahalemana, ohatra, mampirongatra ny fitsaram-bahoaka etsy sy eroa. Eo koa ny fidangan’ny vidim-piainana, lazaina fa misy manararaotra.
Samy tomponandraikitra amin’izany, hono, ny rehetra sy ny tsirairay. Marina tokoa izay. Saingy tsy ireo irery no mahafadiranovana ny vahoaka amin’izao. Eo koa, ohatra, ny ady tany sy fandrobana tany, androahana olona hiala amin’ny taniny. Ao anatin’izany ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany… tsy mazava na tsy hazavaina.
Manampy trotraka ireo ny amin’ny fanamparam-pahefana etsy sy eroa, indrindra any amin’ny faritra sy toerana lavitra mpitondra na naman’ny tany tsy misy fanjakana. Inona no andraikitra sy izay mety ho vitan’ny vahoaka ifotony amin’izany? Samy mety ahitana izany, ohatra, ny mpanatanteraka, mpitandro filaminana, olom-boafidy…
Amin’izany, mahita fialana hatrany ny fanjakana foibe: aza ailika amin’ny fanjakana foibe na ny mpitondra ambony ny fahadisoana sy ny fandikan-dalàna ataon’ny tomponandraikitra isan-tsehatra sy isan’ambaratonga. Mety ho marina koa izay, saingy efa mila hanenika ny tany sy ny fanjakana ny tsy fandikan-dalàna, fanamparam-pahefana…
Na ahoana na ahoana, miharihary izao fa tsy mahavita manara-maso sy mahafehy ny olona eo ambany fiadidiany ny fanjakana foibe. Efa mby amin’ny hoe samy manao izay saim-pantany ny raharaha. Tsy misy na tsy hita intsony izay fanajana sy fampiharan-dalàna, fanarahana rafitra sy ambaratonga… Tsy hita tsinona izay hotahafina?
Tsy tongatonga ho azy izao tsy fanarahan-dalàna saika manenika ny sehatra sy ambaratonga rehetra izao. Iza àry ny tena tomponandraikitra? Ailika amin’ny isan’ambaratonga sy ny vahoaka ifotony ny raharaha. Nefa ny ankizy no tia tsapa fatana, ny lehibe no tia tonotono. Mbola mendrika ho raiamandreny ve ny mpitondra?